ကုန်တင်ရထားနှင့်တွေ့ဆုံရန် input ကို၏အချိန်လေးအတွက်ကင်မရာကိုလွဲချော်ရပ်တန့် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[09 / 09 / 2019] Konya လက်မှတ်အသွားအပြန်ရထားများအတွက်ချွတ်ကိုစလှေတျ	42 Konya
[09 / 09 / 2019] နိုင်ငံတော်သမ္မတအာဒိုဂန်ဧဝံဂေလိတရားကိုပို့ကုန် Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်မှပြင်ဆင်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[09 / 09 / 2019] ကြောင့်အဆင်းလှသောနှောင်းပိုင်းမှညဥ့် izban နောက်ထပ်တောင်တက်မှာသည်အထိ	35 Izmir
[09 / 09 / 2019] ကျောင်းများအသွားအလာအတွက်အတွေ့အကြုံရှိဒုက္ခဆင်းရဲပေး, အစ္စတန်ဘူလ်ဖွင့်လှစ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[09 / 09 / 2019] စွဲလမ်းမှုကနေနိုင်ငံခြားရေးပစ်ချဖို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တူရကီနှင့်အတူအမျိုးသားရထားရထား	78 Karabük
Homeမီဒီယာအဆိုပါကုန်တင်ရထားနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဆိုပါကင်မရာကို input ကိုအချိန်လေးလွဲချော်ရပ်တန့်
ကင်မရာထဲမှာကြောက်စရာအချိန်လေး (ဗီဒီယို) 30 / 10 / 2014 ကင်မရာထဲမှာကြောက်စရာအချိန်လေး: အဆင့်oldu.içကားမောင်းသူရဲ့ inattention အတွက်2ကလူကိုကားလျင်မြန်စွာရထားသတိထားမိခဲ့ပါဘူးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အောက်တွင် နေ. အဆင့်ကူးဖြတ်ကူးရန်ကြိုးစားစဉ်တံခါးဝကိုဖြတ်ကျော်ရန်ကြိုးစားနေသငျသညျကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။2လူများရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပေး၏ကင်မရာကပ်ဘေးဆိုင်ရာမတော်တဆထိခိုက်မှုပြီးနောက်ကားထဲတွင်ထင်ဟပ်။
အဆိုပါခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမီးရထားရထားအာဂျင်တီးနားအတွက်လွဲချော်ရပ်တန့်: 31 ဒဏ်ရာရ 07 / 08 / 2012 31 ခရီးသည်ဒဏ်ရာရရှိအချက်ပြဘူတာအနီးရှိထိတ်လန့်မျှော်စင်၏ရလဒ်အဖြစ်အာဂျင်တီးနားအတွက်လွဲသွားခရီးသည်ရထား၏နောက်ဆုံးကားကိုယူပြီး။ Xnumx ရဲ့မျဉ်းကြောင်း Buenos Aires, သူယူခဲ့ပါတယ်ရှိရာဆေးရုံများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ၏မြို့တော်အတွက် Miter, အခြားသူများကိုသူတို့မြင်ကွင်းတစ်ခုမှာကုသခံခဲ့ရသည်ဖော်ပြထားသည်။ မွို့၌က Metro န်ဆောင်မှုများ၏ဖမ်းဆီးခြင်းမှဦးဆောင်သောမတော်တဆထိခိုက်မှု,6သဘောသဘာဝရက်ကြာသပိတ်၏ယိုယွင်းပျက်စီးလာမှုကြောင့်အသွားအလာပရမ်းပတာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကလူ4ဒဏ်ရာရထက်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်မတော်တဆမှုသေဆုံးခဲ့ 51 ပုပြီးတာနဲ့ရထားဘူတာရုံ၏ဆင်ခြေဖုံး၌ရိုက်ပုတ်ခံရပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအာဂျင်တီးနား။ ရင်းမြစ်: AA ကို
Ray ၏ပက်ဖြန်း output Wagon ရထား! xnumxişçသေဆုံးခဲ့ 07 / 05 / 2017 Ray ၏ပက်ဖြန်း output Wagon ရထား! xnumxişçကွယ်လွန်သွား: TCDD ပက်ဖြန်းအတွက်စေ့စပ်အလုပ်သမားတဦးတည်းလွဲချော်ရပ်တန့်မောကျလှဲရိုက်ယူခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ရထား၏ sequence ကိုအတွက်ပစ္စည်းတင်ဆောင်လှည်းပက်ဖြန်းစတင်ဒဏ်ရာရရှိသည်ဟုပက်ဖြန်းအတွက်တူရကီ-Kırıkkaleမီးရထားလမ်း 1 လုပ်သားများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ KırıkkaleYahşice၏ခရိုင်အတွင်းရှိပက်ဖြန်းသောသူတို့အားအနီးအနားရှိရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်တဲ့ရထားအဖြစ်3တူရကီ-Kırıkkaleမီးရထားလမ်းမှာယနေ့မတော်တဆမှုရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရသိရသည်။ ပက်ဖြန်းစေရန်အချိန်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်ရထားလမ်း 12.30 အချိန်ပိုင်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကိုရထား NOLA ၏ထွက်ပေါက်မှတ်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ချက်ချင်းရထား၏လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကတ်ကြေးထွက်ခွာပြီးနောက် ...
5 လှည်းရထားလွဲချော်ရပ်တန့်။ 13 / 02 / 20125လှည်းရထား Mardin ၏ Nusaybin ခရိုင်အတွင်းရှိလွဲချော်ရပ်တန့်။ အရာရှိများဘူတာ Nusaybin, Nusaybin ထံမှလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များအဆိုအရ Gaziantep ဝန်-bearing လေယာဉ်အရေအတွက်ကို 631425လှည်းရထား Nusaybin ဘူတာရုံဝင်ပေါက်များတွင်လွဲချော်ရပ်တန့်။ duplex မတော်တဆမှုရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းအဖွဲ့ Gaziantep တံခါးပိတ်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမတော်တဆမှုသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့သတင်းပို့ခဲ့ကြသည်။ source: http: //www.sabah.com.t
တစ်ဦးကုန်တင်ရထား၏ရှစ်လှည်းရုရှားတွင်လွဲချော်ရပ်တန့် 12 / 12 / 2018 ပို့ဆောင်ရေးရုရှားန်ကြီးဌာနဖြင့်ကြေညာချက်အရတစ်ဦးကုန်တင်ရထားကားများ၏ Kirov ဘဝမီးရထား Makuh နာရီ Lundank အတွက်အပိုင်းရှစ်အတွက် 19.00 အတွက်လွဲချော်ရပ်တန့်။ အမှတ်ရှစ်ကား 2131 ကုန်တင်ရထားလွဲချော်ရပ်တန့်။ သူမတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာရသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မတော်တဆမှုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစတင်ခဲ့သည်။ ကြောင့်သည်အခြားအချိန်နှောဖန်ဆင်းတဲ့ကြေညာချက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှု, ရန် "လှည်းများ၏လွဲသွားပြီးနောက် Kirov Makuh-Lundank တစျပိုငျးကိုအတွက်ဘဝမီးရထား, ရထားလမ်း၏အဖွင့်အဘို့အSolvyçegodskနှင့် Kirov ဘူတာနောက်တဖန်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များသယ်ယူပို့ဆောင်ဒေသတွင်းမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမတော်တဆမှုများ၏အကြောင်းရင်းအပေါ်တိုးတက်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်" ဟုကြေညာချက်ကဆိုသည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ tr.sputniknews.co
အဆိုပါခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမီးရထားရထားအာဂျင်တီးနားအတွက်လွဲချော်ရပ်တန့်: 31 ဒဏ်ရာရ
Metro တံခါး, ကင်မရာ (ဗီဒီယို) မှရွေ့လျားလှည်းဖွင့်
စပိန်ရထားပျက်ကျမှု: သေပြီ 77 | ကင်မရာကိုအပေါ်မတော်တဆအမှတ်တရများ (ဗီဒီယို-ဓာတ်ပုံပြခန်း)
Metro Spiderman ကင်မရာ (ဓာတ်ပုံပြခန်း) haunts
anbedi ကင်မရာထဲမှာအဆငျ့ဖြတ်မှာကပ်ဘေးဆိုင်ရာမတော်တဆမှု (ဗီဒီယို)
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (156) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)